Tsananguro: Matatu-mativi makuru nzvimbo dhizaini, inokodzera katsi hombe nembwa. Huru pamberi pescreen hwindo + gomba rekufefetera kumusoro rinopa mhuka dzinovaraidza chiitiko chinozorodza muzhizha. Inotakurika inoshanda dhizaini, kuchengetedza nzvimbo uye nyore kutakura. Kaviri anti-kupukunyuka dhizaini, anti-kuvhura zipi + traction buckle. Multi-directional kugadzirisa dhizaini inoita kuti ikwane uye igadzikane kumashure, uye bhanhire repamusoro repapfudzi rinogona kugadziriswa, zvichiita kuti zvive nyore kutakura. Yese dhizaini mumwaka mina, maviri-maitiro uye akawanda-anoshanda mashandiro eiri roller shutter. Matanhatu ekumanikidza, shanu dzakadzikama pfungwa dzechiuno, bendekete, chifuva, musana uye magaro, zvinoderedza kumanikidza kwekutakura. Transparent rakadhindwa epurasitiki goko, ndapota rima, chiriporipapo mwenje, rega katsi dzitarise pasi uye dzinzwe dzakachengeteka. Yakakura nzvimbo inobvumira mhuka dzinovaraidza kutendeuka uye kuve vakasununguka.
Pashure: Puppy Imbwa Hembe Mukadzi Mukadzi Teddy Bichon Pomeranian Schnauzer Mudiki Akakora Makumbo mana Pet Autumn uye Nguva yechando Coat
Zvadaro: Inonyaradza Pet Mishonga Kudya Kudya Kudya Mushonga Kunamatira Wese kune Imbwa uye Katsi Inogona Kudyiswa Calcium Mahwendefa Anodzosera Pet Zvishandiso
Pet Bvudzi Knot Kama Cat muzinga Dog Big Row Muzinga St ...
Pet Bowtie Bhero Pet Zvishongo Kupeta Pet Mutsipa ...